Ukuhlaselwa Okuphezulu Okuhlanu okwenziwe kumasayithi we-Ecommerce | Martech Zone
Esinye sezibalo ezishaqisayo maqondana ne-COVID-19 nokuvalwa phansi kukwanda okumangazayo komsebenzi we-e-commerce:
I-COVID-19 isheshise kakhulu ukukhula kwe-e-commerce, ngokusho kombiko we-Adobe okhishwe namhlanje. Ingqikithi yokusebenzisa imali kwe-inthanethi ngoMeyi ishaye ama-dollar ayizigidi ezingama-82.5 zama-dollar, ikhuphuka ngamaphesenti angama-77 ngonyaka.
UJohn Koetsier, ukukhula kwe-COVID-19 okuphuthumayo kwe-E-Commerce '4 To 6 Years'
Ayikho imboni engakaze ithintwe… izingqungquthela zihambile, izikole zithuthelwe ekuphathweni kokufunda naku-inthanethi, izitolo zithuthelwe ekuthatheni nasekulethweni, izindawo zokudlela zengeze ukukhishwa, futhi nezinkampani zeB2B ziguqule ulwazi lwazo lokuthenga ukuze zinikeze amathemba ngamathuluzi ukuzenzela ukuthengiselana kwabo ku-inthanethi.
Izingozi Zokukhula Nezokuphepha E-commerce
Njenganoma ikuphi ukwamukelwa ngobuningi, izigebengu zilandela imali… futhi kunemali eningi ekukhwabaniseni kwe-e-commerce. Ngokuvumelana ne Isayensi Yezimpawu, ubugebengu be-cyber buzoholela ngaphezu kokulahlekelwa okungaphezu kwamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-12 ngo-2020. Njengoba izinkampani ezintsha zidlulela ku-e-commerce, kubalulekile ukuthi zifake ezokuphepha enguqulweni yazo… ngaphambi kokuba kubenzele ibhizinisi labo.
Ukuthathwa Kwe-akhawunti (ATO) - obeye aziwe njengo ukukhwabanisa kwe-akhawunti, I-ATO ibhekele cishe u-29.8% wakho konke ukulahleka komgunyathi. I-ATO ithola iziqinisekiso zokungena ngemvume komsebenzisi ukuze ithathe ama-akhawunti aku-inthanethi. Lokhu kubenza bakwazi ukuthola idatha yekhadi lesikweletu noma ukuthenga okungagunyaziwe besebenzisa i-akhawunti yomsebenzisi. Ukukhwabanisa kwe-ATO kungasebenzisa imibhalo ezenzakalelayo efaka iziqu ngobuningi noma ibe ngumuntu oyithayiphayo futhi ingene ku-akhawunti. Ama-oda angalethwa kumakheli okulethwa ahlolisisiwe lapho imikhiqizo ithathwa futhi isetshenziswe noma ithengiswe ngemali. Amagama omsebenzisi nephasiwedi kuvame ukuthengiswa ngobuningi noma kuthengiswe ezimakethe zezimakethe zeWebhu Emnyama. Ngoba abantu abaningi basebenzisa ukungena ngemvume nephasiwedi efanayo, imibhalo isetshenziselwa ukuhlola igama lomsebenzisi namaphasiwedi kwamanye amasayithi.
I-Chatbot Imposter - Ama-bots aba yinto ebucayi yezindawo ze-e-commerce zabasebenzisi zokuzibandakanya nezinkampani, ukuzulazula ngezimpendulo ezihlakaniphile, nokukhuluma ngqo nabamele. Ngenxa yokuthandwa kwabo, nabo bayisisulu futhi banesibopho sama-24.1% awo wonke umsebenzi wokukhwabanisa. Abasebenzisi abakwazi ukubona umehluko phakathi kwengxoxo esemthethweni noma engeyinhle engahle ivulwe ekhasini. Usebenzisa i-adware noma imijovo ye-web script imiqili ingabonisa ingxoxo e-pop-up eyimbumbulu bese ikhipha imininingwane ebucayi kakhulu kumsebenzisi ngangokunokwenzeka.
Amafayela wangemuva - Izigebengu ze-cyber zifaka i-malware kusayithi lakho le-e-commerce ngamaphuzu wokungena angavikelekile, njengama-plug-ins aphelelwe yisikhathi noma izinkambu zokufaka. Lapho sebengenile, bayakwazi ukufinyelela kuyo yonke imininingwane yenkampani yakho, kufaka phakathi imininingwane yamakhasimende engakhonjwa (PII). Leyo datha ingathengiswa noma isetshenziselwe ukufinyelela kuma-akhawunti womsebenzisi. U-6.4% wakho konke ukuhlaselwa ukuhlaselwa kwefayela elingaphandle.
I-SQL Injection - amafomu aku-inthanethi, imibuzo ye-URL, noma izingxoxo zengevu zinikela ngamaphoyinti okufakwa kwedatha okungenzeka angabi lukhuni futhi anganikeza isango kubaduni ukubuza imininingwane yolwazi emuva. Leyo mibuzo ingasetshenziselwa ukukhipha imininingwane yomuntu kusuka ku-database lapho kugcinwa khona imininingwane yesayithi. U-8.2% wakho konke ukuhlaselwa kwenziwa ngemijovo ye-SQL.
Imibhalo Yesiphambano Yesayithi (XSS) - Ukuhlaselwa kwe-XSS kunika amandla abahlaseli ukujova imibhalo ngesiphequluli somsebenzisi emakhasini ewebhu abukwa abanye abasebenzisi. Lokhu kunika amandla kubaduni ukudlula izilawuli zokufinyelela futhi bathole imininingwane engakhonjwa yomuntu siqu (PII).
Nayi i-infographic enhle evela kuSignal Sciences ku Ukuphakama Kwamanzi Wokukhwabanisa Kwe-E-commerce - kufaka phakathi izindlela, amaphethini, nezinyathelo zokuzivikela inkampani yakho okufanele ikwazi futhi ifake nanoma yiliphi isu le-e-commerce.
Tags: umkhohlisi we-akhawuntiukuthatha i-akhawuntiukuhlaselwa kwe-akhawuntiukukhwabanisa kwe-akhawuntiAtoemuvaimibhalo yesayithi eleqaubugebengu be-cybere-commerceIzibalo zokuhlaselwa kwe-e-commerceukuhweba ngenkohliso kwe-e-commerceIzindlela zokukhwabanisa ze-e-commerceAmaphethini wokukhwabanisa e-commerceukukhwabanisa kwe-ecommerceukuphepha kwe-ecommerceukukhwabanisa onlineukuphepha kwe-cyber yomthengisinokuvikelekaisayensi eyodwaumjovo we-sqlukuhlaselwa okuphezulu ngezweukuhlaselwa kwewebhu
Ukuhumusha Nokuloba Ukuthuthukisa Ukusebenza Kokumaketha Kwevidiyo